Ny Nippon Airways rehetra dia mandray anjara amin'ny Philippine Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Nippon Airways rehetra dia mandray anjara amin'ny Philippine Airlines
Philippine Airlines (PAL) dia mikasa ny fanitarana haingana ny asany iraisam-pirenena mandritra ny volana vitsivitsy ho avy satria mandefa serivisy ho an'i Hanoi, New Delhi ary Phnom Penh izy ary manampy haavo amin'ny 12 amin'ireo 39 toerana iraisampirenena misy azy.
Ny fahafahan'ny seza iraisampirenena PAL dia hitombo efa ho 10% amin'ity fahavaratra ity, manery ny vokatra sy ny tombom-barotra raha manandrana mampitombo ny fivezivezena amin'ny fahalalahana fahenina ny kaompaniam-pitaterana. Ny PAL dia mitombo ny fahafaha-mitarika ny kaontinanta Amerika Avaratra efa ho 50% amin'ity fahavaratra ity, tohanan'ny fandefasana A350-900s. Satria mampiditra refesina 17 fanampiny isan-kerinandro any Amerika Avaratra i PAL dia manandrana misarika fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tsena amerikana avaratra-atsinanana atsimo atsinanana - mitarika amin'ny fanapahan-kevitra hanampy an'i Hanoi, New Delhi ary Phnom Penh.
Ny fanitarana ny PAL amin'ity fahavaratra ity dia hiteraka fifaninanana bebe kokoa amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Azia Avaratra maromaro, ao anatin'izany ny mpiara-miasa stratejika vaovao All Nippon Airways (ANA). ANA Holdings dia nanambara ny fahazoana tombony 9.5% ao amin'ny PAL Holdings, ilay orinasan-dreny ho an'ny PAL ary ny sampana serivisy serivisy feno PAL Express.
Na dia misy paikady lehibe aza ny fifampiraharahana ho an'ny PAL, izay niezaka ny hanana mpamatsy vola an'habakabaka vahiny nandritra ny taona maro, dia kely ny anjarany, ary ny fampiasam-bola USD95 tapitrisa dia fanovana paosy ho an'ny ANA. Ny zava-misy fa ny fifanakalozana dia manome lanja PAL amin'ny $ 1 miliara fotsiny, na eo aza ny fidiram-bolan'ny vondrona maherin'ny $ 2.5 miliara ary portfolio-pahafahana tena manintona ao Manila, dia taratry ny fanamby atrehin'ireo PAL.
Genghis Khan Airlines dia mandray ny fiaramanidina ARJ21 voalohany
Notazomin'i Vietnam, norahonana fa horoahina hiala tahaka an'i Trump sy Kim Jong Un